Nisy mpivady niara-maty tamin’ity loza ity tsy iza izany fa Rakotonirainy Faliarimanana Niry (42 taona) sy Andrianaivosoa Hajanirina Domohina (40 taona), namela kamboty 3 mirahalahy izy mivady ireto. Araka ny vaovao ofisialin’ny zandary hatrany, sarotra ny tsy hino fa noho ny fandehanana mafy no nahatonga io loza tamin’ny fiara tsy mataho-dalana marika “Sorento” teo Ambatonapoaka io ny sabotsy maraina teo. Tsy nisy nahita ny loza fa ny fipoahana sy ny fiara efa nivadibadika no hita sy ren’ny mponina. Nipoaka teo Ambatonapoaka, lalam-pirenena voalohany avy aty an-drenivohitra hiankandrefana handeha handevina no nisy olana ny kodiaran’ilay 4x4 ka io fahaverezan’ny rivotra io no fototry ny loza raha ny fampitam-baovaon’ny zandary. Vao manomboka mahatsiaro tena kely ny iray amin’ireo roa voa mafy raha ny fampitam-baovaon’ny mpitandro filaminana. Ilay vehivavy mpamily sy ny vadiny ary lehilahy iray hafa no nindaosin’ny fahafatesana. Tsiahivina fa nahazo vahana tato ho ato ny loza tamin’iny lalam-pirenena voalohany iny. Manentana hatrany ny mpitondra fiara ny zandary mba tsy hihoatra ny 80 km isan’ora ho fitsinjovana ny ain’ny olom-pirenena.